Forex Akaunti Management Software, Forex Mt4 Multi Akaunti Manager, akawanda maFX Akaundi | FXCC
musha / Platforms / PC / Multi Account Manager
Vatengesi vezvemabhizimisi vane maverengi akawanda uye mameneja emassetti vanoda zvishandiso zvinoita kuti kugadzirisa maverengi akawanda nyore uye akachengeteka.
Pano paFXCC tinozvirumbidza pakugadzirisa matambudziko vasati vatomuka. Ndosaka tichipa vatengi vatengesi vekambani uye vatariri vemari MetaFx MAM (Multi Account Manager) software. MAM inobatsira zvikuru kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana seMetaTrader Multi Terminal somuenzaniso.
IFXCC MAM yekushanda yakakodzera zvakakodzera ku:
Vatengesi veMabhizimisi kana Vashandi veMari vanodikanwa kutengesa MAT4 multiple accounts panguva imwe chete
Vatengesi vanoda kuona nhoroondo yekambani uye nhoroondo yezvikamu zvakawanda
Vatengesi vanoita mapoka eboka panzvimbo yezvikamu zvakawanda
Our Multi Account Manager solution inotsigira:
Instant execution, Broker control & simple server updates kuburikidza ne server side plugin
Mashizha - Standard uye Mini Lot nhoroondo dzekugovera zvakanakisa mari
Kuvharirwa kwemazana kwemirairo neChitubu chekuita
Pasi rekutarira mawindo mukati meMAM
MAM inopa mikana yakawanda yakasarudzika yekutengeserana zvikwereti:
Roti Kugoverwa: Bhuku rakagoverwa manyokwi kune imwe nhoroondo
Percentage Kugoverwa: Percentage yehuwandu hwemabhizimisi ekutengeserana nheyo yacho inopiwa munhu pane imwe nhamba yeApp Account.
Proportional by Balance: Zvichida Zvichida izvo zvinongotarisa kuwandisa kwehuwandu hwehuwandu pane imwe nhaurikiti duku kune akaunti huru, uye nokuita saizvozvo kugovera ivhu rinotorwa pane tenzi wenhoroondo kune yese inoshandiswa maakaunti.
Proportional by Equity: Zvinyorwa Zvichienzanisa izvo zvinongotanga kuverenga huwandu hwehutano pane imwe nhaurwa yega yega kune iyo master account, uye kuburikidza nokudaro ungogovera vhudzi rinotorwa pane tenzi wenhoroondo kune yese inoshandiswa maakaunti.
Percent Allocation: Muchikamu chino, Mutungamiriri weAkaunti anotsanangura% yehutano hunogona kushandiswa pabasa rega rega, apo X% yehutano inoshandiswa pane imwe nheyo.
Nhoroondo Nekuiswa Unlimited
Post Post Pricing
Instant New Account
Chimwe chezvinhu zvakakurumbira zvikuru muMAT4 ndiyo kukwanisa kutengesa zvakananga kubva kumatsetse. Izvo zvinotakura kune MAM software yedu, kuitira kuti iwe zvino unogona ikozvino kutengesa maakaiti akawanda nekashandisi yebhidhiyo inoshanda.
IFXCC Multi Account Manager iri pamagetsi ekutenga magetsi ekugadzirisa maverengi akawanda. Izvo zvakarongwa urongwa hunonakidza uye huchagadzirisa hutungamiri hwe multiple multiple forex trading accounts.
Please Cherechedza: Iyo MAM software ndeyechitatu-bato kunyorera. Chero zvipi zvehunyanzvi kana zvekutsigira nyaya zvinofanirwa kuendeswa kuMetaFX